VC-IP bụ mmanụ soluble Vitamin C emepụta. Ọ na-arụ ọrụ dị ka a dị ike antioxidant na whitening gị n'ụlọnga, na ma mgbochi-otutu na mgbochi ịka nká ike. Dị ka ndị ọzọ iche nke Vitamin C, VC-IP enyere aka igbochi cellular ịka nká site inhibiting na cross-ojiji collagen, ọxịdashọn nke na-edozi, na lipid peroxidation. VC-IP na-arụ ọrụ synergistically na antioxidant Vitamin E, na egosiwo elu percutaneous absorption ma kwụsie ike. Ọtụtụ ọmụmụ enen akpụkpọ ibelata, foto ...
Product aha:: Ascorbyl Tetraisopalmitate
Nnwale :: 97% min
Molekụla Formula:: C70H128O10
VC-IP bụ mmanụ soluble Vitamin C emepụta. Ọ na-arụ ọrụ dị ka a dị ike antioxidant na whitening gị n'ụlọnga, na ma mgbochi-otutu na mgbochi ịka nká ike. Dị ka ndị ọzọ iche nke Vitamin C, VC-IP enyere aka igbochi cellular ịka nká site inhibiting na cross-ojiji collagen, ọxịdashọn nke na-edozi, na lipid peroxidation. VC-IP na-arụ ọrụ synergistically na antioxidant Vitamin E, na egosiwo elu percutaneous absorption ma kwụsie ike. Ọtụtụ ọmụmụ enen akpụkpọ ibelata, photo-echebe, na hydrating mmetụta VC-IP nwere ike na akpụkpọ. VC-IP nwere ike dị na iche iche nlekọta anụ ngwaahịa dị ka mgbochi merela agadi serums, anya ọgwụgwọ, anụ ibelata gels na lotions / creams.
INCI aha: Ascorbyl Tetraisopalmitate
Ọdịdị: Colorless ìhè odo, uzo mmiri mmiri
nta: nta e ji mara isi
ascorbyl tetraisopalmitate ịzụta
VC-ip inci aha